Hay'adda dhawrista ilmaha - www.hameenlinna.fi
Hämeenlinna.fi / Kaupunki-info / Soomaali / Hay'adda dhawrista ilmaha
Taageero ku saabsan ilmaha korintiisa
Dacwaddaha dhawrista ilmaha
Hay'adda dhawrista ilmaha shaqadeedu waxa ay tahay inay hubiso in ilmaha arimihiisu fiican yihiin. Haddii ilmaha ama ilmaha qoyskiisa ay dhibaato haysato hay'adda dhawrista ilmuhu waxay wax uga qabanaysaa dhibaatada sida ugu dhasaha badan leh.
Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan hay'adda dhawrista ilmaha waxaad ka helaysaa
Waxaad sidoo kale weydiin kartaa shaqaalaha hay'adda dhawrista ilmaha adeegyada ka jira magaalada Hämeenlinna. Meelaha laga helo xafiisyada hay'adda dhawrista ilmuhu waxay ku qoran yihiin afka finnishka:
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan adeegyada dhawrista ilmaha ee Hämeenlinna oo afka finnishka ku qoran waxaad ka helaysaa boggaan internetka:
Waalidka waxaa khasab ku ah inay daryeelaan ilmahooda, inay ilaaliyaan oo koriyaan. Waalidku waxay xaq u lee yihiin in ay shaqada ay hayaan caawimaad uga helaan bulshada sida tusaale ahaan inay caawimaad ka helaan hay'adda dhawrista ilmaha.